Paikady marketing marketing atiny B2B mahomby dia mitaky fahefana | Martech Zone
Matetika ireo mpivarotra dia sahirana fotsiny mba haharaka ny filan'ny atiny sy ny programa marketing mailaka. Matetika kokoa, ny paikadin'ny mpanjifanay dia miorina manodidina ny fizotrany anatiny. Vaovao, famoahana vokatra, fanavaozana ny serivisy na fandaharam-potoana isan-kerinandro ihany no mibaiko ny atiny navoaka.
Ny olana, mazava ho azy, ny drafitry ny varotra ataon'ny orinasanao dia tsy manaraka ny fahazaran'ny dia lavitra ataonao. Ny orinasa ho avy dia mety mitady vaovao azonao omena isan'andro amin'ny taona, na mety amin'ny fizaran-taona, na amin'ny teti-bola. Ny fotoana dia iray amin'ireo fampanantenan'ny fikolokoloana fironana sy ny rafitra fanaovana automatisation marketing - manome atiny izay misarika na manosika ny orinasa mankany amin'ny fiovam-po miorina amin'ny ny fandaharam-potoana.
Saingy mbola tsy misy lesoka ihany ny mandeha ho azy. Orinasa maro no mamakafaka sy manangona ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa mba hamorona optimised tsingerim-piainana. Ny zava-misy dia mazava ho azy fa ny asa tsirairay dia mandeha amin'ny fandaharam-potoanany - manery mafy loatra ary vetivety dia very ny fanantenana. Misintona miadana loatra ary mety hahazo ilay mpifaninana aminao ny varotra.
Misy refy marobe amin'ny fivoaran'ny atiny. Matetika ny orinasa dia miasa amin'ny famokarana. Ohatra iray ny famokarana lahatsoratra bilaogy isan'andro, gazety iray isan-kerinandro, infographic isam-bolana ary whitepaper isan-telovolana. Saingy ny famokarana dia tsy mahazo orinasa izay tokony hisy. Ny fanatrehana dia ny fananana ny atiny mety amin'ny toerana mety rehefa mitady azy ilay prospect.
Noho izany, ny orinasa dia mamolavola kalandrie mavesatra mavesa-danja, dingana anatiny, ary fandaharam-pisondrotana ary fanentanana amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe mba hiantohana ny fahombiazana. Teknolojia mandeha ho azy vaovao dia mampiasa teknolojia fianarana milina mba hanatsarana ny fifandraisana amin'ny prospect ary hitety ny fiovam-po amin'ny hafainganam-pandeha miankina amin'ny mpanjifa.
Mbola tsy ampy io.
Ny olana, mazava ho azy, dia ny mpifaninana rehetra mahefa miasa mitovy zoro ary angamba mampihatra teknolojia mitovy amin'izany aza. Tsy ampy fotsiny ny manohy mamokatra atiny anaty tsingerina miverimberina. Ny famindrana orinasa mitarika avy amin'ny fanantenana amin'ny marketing mankany amin'ny mpitarika mahay dia mitaky fahefana. Ary ny famindrana fitarihana mahay any amin'ny fivarotana dia mitaky fahatokisana.
Rehefa mitady vahaolana ny orinasa dia mitady izany amin'ny fahefana. Te hanalefaka ny risika ny orinasa, ka mirona hividy amin'ny mpivarotra sy ny vahaolana amin'ny fahefan'ny indostria.
Matetika no odian-tsy jerena ny fahefana na eo aza ny fanalahidin'ny tetikady marketing atiny mahomby. Tweet ity!
Ny orinasa sasany dia mangataka ny fanampian'ny influencer izay efa manana fahefana amin'ny indostria nomena mba hampandroso ny azy ireo. Nahita vokatra mifangaro tamin'ity paikady ity izahay hatramin'ny hery miasa mangina dia matetika no marina laza -tserasera.
Ny fomba mahomby indrindra hahatratrarana ny fahefana dia tsy amin'ny fandoavana izany; ny fananganana ny anao manokana. Tweet ity!
Ny fahefana manorina miaraka amin'ny atiny dia tsy momba ny fampivelarana atiny vaovao. Ny momba ny fanaraha-maso ny atiny rehetra efa anananao sy ny fanamafisana izany. Ny momba ny fanesorana atiny ivelany izay tsy mitondra mitarika na manetsika ny làlan-drivotra.
Amin'ny maha refy ny fahefana azy dia tsy misy rafitra tsara noho Google. Ny algorithman'i Google dia nivoatra tato anatin'ny taona vitsivitsy mba hifantoka amin'ny maha-zava-dehibe sy ny fifandraisana misy eo amin'ny olona, ​​ny orinasa, ny toerana, ny anaran'ny vokatra ary na ny olona ao anatin'ny fikambanana aza. Raha manontany tena ianao raha manam-pahefana ny orinasanao na tsia dia tokony hikaroka ianao amin'izay toerana misy anao amin'ireo lohahevitra mifandraika amin'ny vinavinam-pikarohana amin'ny Internet.
Mba hahazoana laharana tsara amin'ny valin'ny motera fikarohana dia tsy maintsy mamorona atiny tsy mampino ianao. Ho an'ny teny fampifangaroana teny lakile nomena anao, izany dia mitaky anao handalina izay mandresy ny fikarohana ary manao asa feno kokoa. Izahay dia mamantatra lohahevitra izay misy laharana tsara kokoa amin'ny mpifaninana noho isika, mampivelatra atiny tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fampiasana lahatsoratra, sary ary horonan-tsary… ary manavao ny atiny efa ananantsika izahay izay tsy milahatra tsara.
Ny ezaka nataonay dia niova hatramin'ny famokarana atiny vaovao 100% ho lasa izao Vaovao 50% ary fanatsarana 50% ny atiny ankehitriny. Ny paikadin'ny votoatinay dia nifindra lavitra ny famokarana lahatsoratra, infografika ary horonan-tsary vaovao. Manatsara ny atiny misy ankehitriny izahay, mamerina mamoaka azy ho vaovao (amin'ny URL iray ihany) ary mampiroborobo izany amin'ny fiaraha-monina. Ampidirinay koa ny paikady karama mba hampitomboana ny tratra.
Satria ny tsara indrindra atiny, ho ambony kokoa ny laharana. Mahagaga ny valiny. Manerana ireo lohahevitra teny an-jatony niarahanay niasa, nifindra tamin'ny salanisa 11 izahay ho amin'ny laharana antonony 3. Ny fiovam-ponay dia nihoatra ny 270% noho ny fahazoana firaka. Ary ny vidinay isaky ny firaka dia mihena raha mihatsara ny kalitaon'ny firaka.
Ny naoty farany momba an'io. Ny manam-pahefana dia tonga amin'ny olona mora kokoa noho ny orinasam-pandraharahana, noho izany dia tsy maintsy apetrakao any ivelany ireo mpitondra anao. Apple dia marika goavambe, fa ny fahefan'ny orinasa dia tsy misy anarana toa an'i Steve Jobs, Jonathon Ives, Tim Cook, Steve Wozniak, Guy Kawasaki, sns.
Omeo fotoana ny olonao ho olo-malaza ary afaka hanafainganana ny fahefan'ny orinasanao ianao. Ny fahitana ny mpitondra anao miteny amin'ny hetsika sy fihaonambe dia mametraka ny orinasanao eo imason'ny mpanatrika izay misy ifandraisany sy ara-potoana. Ny fifandraisana amin'ny olona dia hampihena ny fotoana ilaina hanakatonana ny varotra satria afaka mampiseho ny fahefanao ianao ary mahazo ny fahatokisan'ny vinavina.
Tags: fahefanab2bfahefana b2bfiovam-po b2bfahefana ao anatyGuy kawasakiJonathon Ivessteve jobsSteve WozniakTim Cook